ब्यूँझने राशिको क्यान्सरबाट लाइब्ररी मार्फत मकरसम्म पुग्छ; मेष राशिबाट क्यान्सर हुने सुत्ने राशी।
Vol।6नोभेम्बर, 1907। नम्बर 2
निन्द्रा यति सामान्य चीज हो कि हामी विरलै मात्र सोच्दछौं वा कहिले यो विचार गर्दैनौं कि यो कस्तो अद्भुत घटना हो र न यो हाम्रो अस्तित्वमा यो रहस्यमय भूमिका खेल्दछ। हामी हाम्रो जीवनको एक तिहाइ निद्रामा बिताउँछौं। यदि हामी si० वर्ष बाँचेका छौं भने हामीले त्यस अवधिको बीस वर्ष निद्रामा बितायौं। बच्चाहरूको रूपमा हामीले चौबीस घण्टाको एक तिहाइ भन्दा बढी निद्रामा बितायौं, र शिशुहरूको रूपमा, हाम्रो आधा भन्दा बढी दिनमा सुतिरहेको छ।
प्रकृतिको हरेक विभाग र राज्यमा सबैकुरा निन्द्रा हुन्छ, र प्रकृतिको कानून अन्तर्गत केहि पनि निन्द्रा बिना गर्न सक्छ। प्रकृति आफै सुत्छ। संसार, मानिस, बोटबिरुवा र खनिजहरू, एकै किसिमको निद्रा चाहिन्छ ताकि उनीहरूको गतिविधिहरू चल्दछन्। निद्राको अवधि भनेको त्यो समय हो जुन प्रकृतिले आफूलाई जगाउने क्रियाकलापबाट अलग राख्छ। निद्राको समयमा प्रकृतिले भयानक भीडले उनको जीवहरूलाई गरेको क्षति मर्मत गर्दछ, र जीवनको पहिरन।
हामी त्यसबाट प्राप्त गरेको ठूलो फाइदाहरूका लागि निद्राको लागि कृतघ्न छौं। हामी अक्सर निन्द्रामा बिताएको समयको व्यर्थको रूपमा पछुताउँछौं; जबकि, यो निद्रा को लागी थिएन, हामी केवल जीवन मा हाम्रो मामला मा गर्न असमर्थ हुनु पर्छ, तर हामी हामी अज्ञात क्षेत्र जो संग हामी थोरै परिचित छन् बाट प्राप्त ठूलो लाभहरु को खोल्नु पर्छ।
यदि हामीले थप निन्द्राको अध्ययन ग lost्यौं भने समय गुमाएको समयलाई तुच्छ ठान्नु वा यसलाई आवश्यक पर्ने खराबको रूपमा सहनुको साटो यस अदृश्य संसारको साथ हामी घनिष्ठ सम्बन्धमा पर्नुपर्दछ जुन हामी अहिले उभिरहेका छौं, र हामीले यसबाट के सिक्नुपर्दछ भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ। यस शारीरिक जीवन को धेरै रहस्यहरु।
निद्रा र ब्यूँझ्ने आवधिकता जीवनको प्रतीकात्मक हो र मृत्यु पछाडि अवस्थित राज्यहरू। एक दिनको उठेको जीवन पृथ्वीमा एक जीवनको प्रतीक हो। रातको निद्राबाट ब्यूँझनु र दिनको कामको लागि तयारी गर्नु एउटा बाल्यावस्था र जीवनको कार्यको तयारीको लागि समान छ। तब आउँछ चासो, कर्तव्य र जिम्मेवारी गृह जीवन, व्यवसाय जीवन, नागरिकता र नागरिकता, र बुढेसकालको। त्यसपछिको लामो निन्द्रा आउँछ जुन हामी अब मृत्यु भन्छौं, तर वास्तवमा यो आराम र अर्को जीवनको कामको लागि तयारी हो, जस्तो निद्राले हामीलाई आउँदो दिनको लागि तयार गर्दछ। गहिरो निन्द्रामा हामी दिनको जीवन, शरीरको ख्याल राख्ने कुनै कुरा सम्झन सक्दैनौं, र हामी फेरि ब्यूँझने जीवनमा फर्केर नआएसम्म यी चिन्ताहरू फेरि लिइन्छन्। हामी गहिरो निद्रामा परेका छौं जसरी शरीर चिहानमा थियो वा खरानीमा परिणत भएको हामी संसारमा मरेका छौं।
जुन हामीलाई दिन प्रतिदिन जोड्दछ त्यो शरीरको रूप हो, जसमा अघिल्लो दिनको सम्झनाहरू प्रभावित भएका छन्। ताकि निद्रा पछि हामीले यी चित्रहरू वा सम्झनाहरू पाउन सक्दछौं जुन जीवनको ढोकामा हाम्रो पर्खाइमा छन्, र तिनीहरूलाई हाम्रो आफ्नै रूपमा चिनिन हामी आफ्नो तस्वीर निर्माण जारी राख्छौं। यस संसारको सम्बन्धमा मृत्यु र निद्राको बीचको भिन्नता भनेको हामी निन्द्रापश्चात संसारमा फर्कंदा शरीरले हामीलाई पर्खिरहेका भेट्टाउछौं, जबकि मृत्युपश्चात् हामी नयाँ शरीर पाउँछौं जुन हामीले तालिमको सट्टा तयार हुनुको सट्टा तालिम र विकास गर्नुपर्दछ। प्रयोग गर्नुहोस्।
परमाणु, अणुहरू, कोषहरू, अ organs्गहरू र एक व्यवस्थित शरीर, प्रत्येकसँग यसको विश्राम र निद्राको अवधि हुनुपर्दछ ताकि सम्पूर्ण संस्था त्यस्तै जारी रहन सक्दछ। प्रत्येकसँग यसको कार्यको अनुसार आरामको अवधि हुनुपर्दछ।
ब्रह्माण्डमा सबै कुरा सचेत छ, तर प्रत्येक चीज आफ्नै विमानमा सचेत छ, र यसको कार्यहरूको डिग्री अनुसार। मानव शरीरको समग्रमा एक सचेत सिद्धान्त रहेको छ जुन शरीरको अ supports्ग र अ parts्गलाई समन्वय, समर्थन र प्रवेश गर्दछ। शरीरको प्रत्येक अ्गमा सचेत सिद्धान्त हुन्छ जसले यसका कोषहरूलाई समेट्छ र समावेश गर्दछ। प्रत्येक कोषमा सचेत सिद्धान्त हुन्छ जुन आफ्नो क्षेत्रको अणुहरू बनाउँछ। प्रत्येक अणुको सचेत सिद्धान्त हुन्छ जसले परमाणुहरूलाई उनीहरूको तत्वबाट आकर्षण गर्दछ र ध्यान केन्द्रित गर्दछ। प्रत्येक परमाणुको एक सचेत सिद्धान्त हुन्छ जुन त्यो तत्वको आत्मा हो जुन यो सम्बन्धित छ। तर परमाणु एक परमाणुको रूपमा मात्र सचेत हुन्छ जब यो परमाणुको विमानमा परमाणुको रूपमा कार्य गर्दछ यो कस्तो प्रकारको परमाणु हो र यससँग सम्बन्धित परमाणु तत्वमा। उदाहरणका लागि, कार्बनको परमाणुको सचेत सिद्धान्तको प्लेन तत्वहरूको सचेत सिद्धान्त हो, तर तत्त्वको खास प्रकारको चेतना सिद्धान्त कार्बन हो, र सचेत तत्त्व सिद्धान्तको रूपमा यसको डिग्री यसको कार्यात्मक अनुसार हुन्छ। कार्बनको एक तत्वको रूपमा गतिविधि। त्यसैले सबै तत्वहरु प्रत्येक को आफ्नो चेतना सिद्धान्त हो जो तत्व को आत्मा हो। जबसम्म परमाणु यसको तत्त्वमा रहन्छ यो पूरै सचेत सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुन्छ जुन त्यसमा सम्बन्धित छ तर जब यो अन्य तत्वहरूको परमाणुको साथ मिल्छ तब यो आफैमा भन्दा भिन्न संयोग चेतना सिद्धान्तद्वारा नियन्त्रण हुन्छ। कार्बनको परमाणुको रूपमा यसले कार्बनको कार्य गर्दछ।
परमाणु आत्मा-पदार्थको अविभाज्य कणहरू हुन्छन् जुन डिजाइन वा फारमको सचेत सिद्धान्त अनुसार संयोजनमा प्रवेश गर्छन्। अणुको सचेत सिद्धान्तले डिजाइन वा फारमको रूपमा कार्य गर्दछ। डिजाइन वा फारमको यो सचेत सिद्धान्तले यसको डिजाइनमा आवश्यक परमाणुहरूलाई आकर्षित गर्दछ, र परमाणुहरू, प्रत्येकले आफ्नै तत्व वा सचेत सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्दछ, आकर्षणको कानूनको पालना गर्दछ र प्रत्येक संयोजन र डिजाइनमा प्रवेश गर्दछ, निर्देशित र फोकसमा आयोजित अणुको सचेत सिद्धान्त। यो खनिज राज्य भर मा प्रमुख प्रभाव हो, जुन अदृश्य भौतिक दुनिया देखि देखिने भौतिक दुनिया को अन्तिम चरण र देखिने भौतिक मा माथि माथिल्लो चरण हो। डिजाइन वा फारमको सचेत सिद्धान्त सदाका लागि त्यस्तै रहन्थ्यो यदि यो जीवनको सचेत सिद्धान्तको लागि होईन, जसको कार्य हो विस्तार, वृद्धि। जीवनको सचेत सिद्धान्तले अणुको माध्यमबाट दौडन्छ र यसलाई विस्तार र बढ्नको लागि अग्रसर गर्दछ, त्यसैले अणुको रूप र डिजाइन बिस्तारै कोशिको डिजाईन र रूपमा विकसित हुन्छ। सेलको सचेत सिद्धान्तको कार्य जीवन, विस्तार, वृद्धि हो। एक अंगको सचेत सिद्धान्त इच्छा हो। यो चाहनाले कोषहरूलाई सँगै समूह गर्दछ, आफैंमा सबै चीजहरू तान्दछ जुन यसको प्रभावमा पर्दछ र यसको आफ्नै कार्य बाहेक सबै परिवर्तनहरूको प्रतिरोध गर्दछ। सबै अंगहरूको सचेत सिद्धान्तको कार्य इच्छा हो; प्रत्येक अ its्गले आ-आफ्नो कार्यशील सचेत सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्दछ र अन्य सबै अ res्गहरूको कार्यलाई प्रतिरोध गर्दछ ताकि विभिन्न तत्वहरूका परमाणुहरूको रूपमा सँगसँगै अणुको चेतना सिद्धान्त अन्तर्गत कार्य गर्दछ जुन उनीहरूको रूपमा रहेको थियो, त्यहाँ अब छ शरीरको रूपको सचेत सिद्धान्तको समन्वय गर्दै, जसले एक अर्काको सम्बन्धमा सबै अंगहरूलाई समाहित गर्दछ। समग्रको रूपमा शरीरको रूपको समन्वयित सचेत सिद्धान्तले अ organs्गलाई प्रभुत्व गर्दछ र तिनीहरूलाई सँगै कार्य गर्न बाध्य गर्दछ, यद्यपि प्रत्येकले आ-आफ्नो चेतना सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्दछ। प्रत्येक अ organ्गले बारीको रूपमा यो कोषहरू सँगै बनेको कोषहरू राख्छ, प्रत्येक कोषहरू यस अ in्गमा छुट्टै काम गर्दछ। प्रत्येक कोषले आफैंमा अणुहरू हावी गर्दछ; प्रत्येक अणुको परमाणु हुन्छ जुन यो केन्द्रित हुन्छ, र प्रत्येक परमाणुले यसको मार्गनिर्देशित सचेत सिद्धान्त अनुसार काम गर्दछ, जुन त्योसँग सम्बन्धित तत्व हो।
यस प्रकार हामीसँग प्रकृतिका सबै राज्यहरू सहित मानव पशुको शरीर छ: परमाणुले प्रतिनिधित्व गरेको आधारभूत, अणु खनिजको रूपमा खडा हुन्छन्, तरकारीका रूपमा बढ्ने कोशिकाहरू, अंगहरू जनावरको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, प्रत्येकको प्रकृति अनुसार। प्रत्येक सचेत सिद्धान्त यसको कार्यको लागि मात्र सचेत हुन्छ। परमाणुले अणुको कार्यको बारेमा सचेत हुँदैन, अणु कोषको कार्यको बारेमा सचेत हुँदैन, कोष अंगको कामका बारे सचेत हुँदैन, र अंगले संगठनको कार्यहरू बुझ्दैन। ताकि हामी देख्न सक्छौं सबै सचेत सिद्धान्तहरू आफ्नै विमानमा प्रत्येकले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ।
परमाणुको लागि आराम गर्ने समय त्यो समय हुन्छ जब अणुको चेतना सिद्धान्तले काम गर्न बन्द गर्दछ र परमाणुलाई स्वतन्त्र गर्दछ। अणुको लागि आरामको अवधि तब आउँछ जब जीवनको सचेत सिद्धान्तलाई फिर्ता लिन्छ र काम गर्न बन्द गर्दछ र जब जीवन अणुलाई पछि हटाइन्छ। सेलको लागि आरामको अवधि आउँछ जब इच्छाको सचेत सिद्धान्तले यसको प्रतिरोध रोक्दछ। अ of्गको बाँकी अवधी त्यो समय हो जब शरीरको समन्वयात्मक चेतना सिद्धान्तले यसको कार्य रोक्छ र अंगहरूलाई प्रत्येकले आ-आफ्नै तरिकाले कार्य गर्न अनुमति दिन्छ, र शरीरको समन्वयको लागि आराम आउँछ जब मानव चेतना सिद्धान्त हो। शरीरको नियन्त्रण बाट फिर्ता लिनुभयो र यसलाई यसको सबै भागहरूमा आराम गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
निद्रा भनेको विशेष सचेत सिद्धान्तको निश्चित निश्चित कार्य हो जुन प्रकृतिको कुनै पनि राज्यमा कुनै चीज वा चीजलाई निर्देशित गर्दछ। निद्रा भनेको त्यो अवस्था वा सचेत सिद्धान्तको अवस्था हो जुन आफैंले आफ्नै विमानमा कार्य गर्न बन्द गरी संकायलाई अभिनय गर्नबाट रोक्दछ।
निद्रा अन्धकार हो। मानिसमा निद्रा, वा अन्धकार, दिमागको त्यस्तो कार्य हो जसले अन्य कार्यहरू र संकायहरूमा यसको प्रभाव विस्तार गर्दछ र उनीहरूको सचेत कार्यलाई रोक्दछ।
जब दिमाग जो भौतिक पशु शरीरको हावी प्रमुख चेतना सिद्धान्त हो शरीरको माध्यमबाट वा त्यो शरीरको साथ काम गर्दैछ, शरीरका सबै अ and्गहरू, र यसले सम्पूर्ण रूपमा, दिमागका विचारहरूलाई प्रतिक्रिया गर्दछन्, ताकि जब दिमागले प्रभुत्व जमाउँछ, संकाय र इन्द्रियहरु प्रयोग मा राखिएको छ र शरीर मा नोकरहरु को सम्पूर्ण retinue प्रतिक्रिया पर्छ। तर शरीर एक समयको लागि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छ।
निद्रा तब आउँदछ जब शरीरका विभिन्न विभागहरू दिनको कामबाट थकित र थकित हुन्छन् र दिमागका फ्याकल्टीहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्, र त्यसैले दिमागको जुन सुन्दरतालाई प्रेरित गरिन्छ। तर्क सिद्धान्त त्यसपछि यसको संकाय मा पकड हराउँछ। संकायहरूले शारीरिक इन्द्रियहरुलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छन्, शारीरिक इन्द्रियहरु को अंगहरु को पकड गर्न को लागी रोकिन्छ, र शरीर विलाप मा डुब्न। जब दिमागको सचेत सिद्धान्त दिमागका संकायहरूको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न बन्द गरीसक्यो र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट आफूलाई अलग गर्‍यो, निद्रा लाग्यो र सचेत सिद्धान्त संवेदनशील संसारबाट अनजान हुन्छ। निद्रामा मान्छेको सचेत सिद्धान्त शान्त र अँध्यारो अज्ञानमा डुबेको हुन सक्छ वा अन्यथा संवेदनशील जीवन भन्दा उच्च विमानमा अभिनय गरिरहेको हुन सक्छ।
सचेत सिद्धान्तको फिर्ताको कारण निद्राको फिजियोलजीको अध्ययनले देख्नेछ। प्रत्येक अणु, कोष, शरीर र सम्पूर्ण शरीरको अ as्ग, एक अर्काको आफ्नै कार्य गर्दछ; तर प्रत्येक केवल एक निश्चित अवधि को लागी काम गर्न सक्दछ, र अवधि प्रत्येक को कर्तव्य द्वारा निर्धारित गरीन्छ। जब कार्यको अवधि नजिक आईपुगेको छ यसले माथिको प्रभावशाली प्रभावलाई प्रतिक्रिया दिन असक्षम हुन्छ, यसको काम गर्न असमर्थताले यसको आफ्नै असक्षमताको प्रभावशाली प्रभावलाई सूचित गर्दछ र यसको प्रभावले यसको माथिल्लो चेतन सिद्धान्तलाई बदल्छ। प्रत्येकले आफ्नो प्रकृति अनुसार काम गर्ने, एक जनावरको शरीरमा परमाणु, अणु, कोषहरू र अंगहरू, प्रत्येकको प्रकृति द्वारा तोकिए अनुसार आरामको लागि समयको शरीरको रूपको अध्यक्षता समन्वय गर्ने सचेत सिद्धान्त सूचित गर्दछ, र त्यसपछि प्रत्येक प्रमुख सचेत सिद्धान्तले यसको प्रभाव फिर्ता लिन्छ र तलकोलाई आराम गर्न अनुमति दिन्छ। यसलाई नै प्राकृतिक निद्रा पनि भनिन्छ।
मानवको सचेत सिद्धान्तको टाउकोमा यसको केन्द्र हुन्छ, यद्यपि यो शरीर भर फैलन्छ। जबकि यो टाउकोमा रहन्छ भने मानिस निन्द्रामा परेको छैन यद्यपि उहाँ वरिपरिका वस्तुहरू बारे अनजान हुन सक्नुहुन्छ, र शरीर एकदम रिलकस हुन सक्छ। निद्रा आउनु भन्दा पहिले मानवको सचेत सिद्धान्त शिर छोड्नु पर्छ र शरीरमा डुब्नु पर्छ। जो बस्न वा बस्दा कडा रहन्छ ऊ निदाउँदैन। जो सपना देख्छन्, उसको शरीर एकदम रिलक्स भएको छ भने निदाइरहेको छैन। साधारण मानिसका लागि निद्रा सबै कुराको पूर्ण बिर्सिनु हुन्छ।
निद्राको आवश्यकताको पहिलो संकेत ध्यान दिन असमर्थता हो, त्यसपछि आवाज, आवरण वा शरीरको सुस्ती। मांसपेशीहरु आराम, पलक बन्द, नेत्रगोल माथि माथि। यसले स that्केत गर्दछ कि सचेत सिद्धान्तले शरीरको समन्वय गर्ने मांसपेशीहरूमा नियन्त्रण राख्दछ। मानवको सचेत सिद्धान्त तब पिट्यूटरी शरीरको आफ्नो सिटबाट विच्छेदन हुन्छ, जुन शारीरिक शरीरको स्नायु प्रणालीको संचालन केन्द्र हो, वा यो केन्द्र पालन गर्न असमर्थ भएकोले यति थकित छ। त्यसोभए यदि त्यहाँ दिमागको लागि रुचि बुझ्ने कुनै कुरा छैन भने, यसले पिट्यूटरी शरीरमा यसको संचालन सीट छोडिदिन्छ, र स्नायु प्रणाली पूर्ण रूपमा आराम गर्दछ।
यदि सबै कुरा भुल्छ भने एक जना निदाएको भने पनि हुन सक्छ, तर यदि अर्ध चेतन अवस्था अवस्थित छ, वा कुनै पनि प्रकारको सपना देखा पर्दछ भने निद्रा आउँदैन, किनकि दिमागको सचेत सिद्धान्त अझै टाउकोमा छ र छ। उद्देश्यको सट्टागत सापेक्षिक इन्द्रियहरूसँग लिइएको हो, जुन निद्रामा केवल एक हटाउने मात्र हो।
सपना मा सचेत सिद्धान्त आँखा, कान, नाक, र मुख, र यी इन्द्रियहरु संग सम्बन्धित चीजहरु को सपनाहरु को लागी असर गर्ने स्नायु प्रवाह संग सम्पर्कमा छ। यदि शरीरको केही अंश प्रभावित छ, बिरामी छ, वा घाइते छ, वा यसमा काम लगाइएको छ भने, यसले सचेत सिद्धान्तको ध्यान समात्न सक्छ र सपना निम्त्याउन सक्छ। यदि, उदाहरणका लागि, खुट्टामा दुखाइ छ भने यसले दिमागमा यसको सम्बन्धित केन्द्रहरूलाई असर पार्दछ, र यसले प्रभावित भागको सापेक्ष दिमागको सचेत सिद्धान्तको अगाडि बढाइचढाइ तस्बिरहरू फ्याँक्न सक्छ; वा यदि खाना खाइन्छ जुन पेटले प्रयोग गर्न सक्दैन, उदाहरणका लागि विरलै दुर्लभ खण्डमा, दिमाग प्रभावित हुनेछ र सबै प्रकारका असुविधाजनक चित्रहरू दिमागमा सुझाव दिन सकिन्छ। प्रत्येक इन्द्रियको टाउको मा निश्चित अंग हुन्छ, र चेतना सिद्धान्त यी केन्द्रहरु संग सम्पर्क राखी उनीहरुको नाडहरु बाट, र एक ईथरिक सम्बन्ध द्वारा। यदि यी कुनै पनि अ upon्गमा कार्य गरिएमा तिनीहरू सचेत सिद्धान्तको ध्यान राख्छन र निद्रा आउँदैन। जब एक सपना, सचेत सिद्धान्त टाउको मा छ, वा मेरुदण्ड कशेरुका मा रहेको मेरुदण्ड को भाग को भाग को लागी पछि हटेको छ। जब सम्म साधारण सपना देख्छ, सचेत सिद्धान्त माथिल्लो ग्रीवा कशेरुकाको मेरुदण्ड भन्दा धेरै टाढा हुँदैन। जब सचेत सिद्धान्त ग्रीवा कशेरुकाको पहिलोबाट ओर्लन्छ, यो सपना देखि बन्द हुन्छ; अन्तत: संसार र इन्द्रियहरु अदृष्य हुन्छन् र निद्रामा विजय हुन्छ।
मानिसको चेतना सिद्धान्त भौतिक विमानबाट हट्ने बित्तिकै पृथ्वी र वरपरका प्रभावहरूको चुम्बकीय धाराले शरीरका अंग र अ parts्गहरूको मर्मतको काम सुरु गर्दछ। मांसपेशिहरु आराम र शरीर आराम संग र निद्रा को लागी सही स्थिति संग, विद्युत र चुम्बकीय प्रवाहहरु समायोजित र शरीर र यसको अंगहरु सन्तुलित स्थिति मा बहाल।
त्यहाँ निन्द्राको विज्ञान छ, जुन दिमागसँग यसको सम्बन्धमा शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनहरूको ज्ञान हो। निन्द्राको कानूनको पालना गर्न अस्वीकार गर्नेहरूले बिरामी स्वास्थ्य, रोग, पागलपन, वा मृत्युबाट पनि जरिवाना तिर्दछन्। प्रकृतिले निद्राको लागि समय तोक्छ, र यो समय मानिस बाहेक सबै प्राणीहरूले यसलाई पालन गर्छन्। तर मानिस अरूले जस्तै यो कानूनलाई बेवास्ता गर्दछ, जबकि उसले आफ्नो खुशीलाई पछ्याउने प्रयास गर्दछ। शरीर र दिमाग बीचको सुमधुर सम्बन्ध सामान्य निन्द्रा द्वारा ल्याइएको हुन्छ। सामान्य निन्द्रा शरीरको प्राकृतिक थकानबाट आउँदछ र निद्राको लागि सही स्थिति र निद्राको अघिल्लो मनको स्थितिबाट ल्याइन्छ। प्रत्येक कोष र शरीरको अंग, साथ साथै शरीर पनि, ध्रुवीकरण गरिएको छ। केही शरीरहरू तिनीहरूको स्वभावमा धेरै सकारात्मक हुन्छन्, अरूहरू नकारात्मक छन्। यो शरीरको संगठन अनुसार कुन स्थिति निद्राको लागि उत्तम हो।
त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिले कुनै निर्धारित नियमहरूको पालना गर्नुको सट्टा उसको स्थिति पत्ता लगाउनु पर्छ जुन उसको टाउकोमा झुण्डिरहनु उत्तम हो र शरीरको कुन भागमा ढल्नुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिले अनुभवको लागि आफैंमा यी कुराहरु थाहा पाउनु पर्छ शरीरको आफैंको परामर्श र सोधपुछको माध्यमबाट। यी मामिलाहरू एक शौकको रूपमा लिनु हुँदैन, र लहर बनाउनु हुँदैन, तर उचित ढ at्गले हेर्नु पर्छ र कुनै समस्या भए जस्तो गरी व्यवहार गर्नु पर्छ: अनुभव वारन्ट भएमा स्वीकार्नुपर्दछ, र अनुचित भएमा अस्वीकृत गरिएको छ, वा यदि विपरित प्रमाणित छ भने ।
सामान्यतया, राम्रोसँग समायोजित शरीरहरू ध्रुवीकरण गरिन्छ जसले टाउको उत्तरतर्फ औंल्याउँदछ र दक्षिणमा खुट्टाहरू, तर अनुभवले देखाउँदछ कि मानिसहरू पनि त्यति नै स्वस्थ छन्, अन्य तीन दिशाहरू मध्ये कुनैमा इशारा गरेर राम्रो सुतेका छन्।
निद्राको बखत शरीरले अनैच्छिक रूपमा यसको स्थिति आफैलाई यसको वरिपरि र चुम्बकीय प्रवाहहरूमा समाहित गर्न परिवर्तन गर्दछ जुन प्रबल हुन्छ। सामान्यतया, एक व्यक्ति पछाडिपट्टि निदाउनु राम्रो हुँदैन, यस्तो स्थितिले शरीरलाई धेरै हानिकारक प्रभावहरूको लागि छोडिदिन्छ, यद्यपि त्यहाँ मानिसहरू छन् जो राम्ररी निद्रामा सुतेपछि मात्र निदाउँछन्। फेरि यसले भने कि बाँया छेउमा सुत्नु राम्रो हुँदैन किनकि त्यहाँ हृदयमा रक्तचापमा हस्तक्षेप गर्ने दबाब रहेको छ, यद्यपि धेरै जना बाँया छेउमा सुत्न रुचाउँदछन् र यसबाट अरु कुनै हानि पाउन सक्दैनन्। एनीमिक व्यक्तिहरू जसको भाँडाका पर्खालहरू सामान्य टोन हराउँदछन्, प्राय: बिहान ब्यूँझदा पछाडि पीडा हुन्छ। यो प्राय: पछाडि निदाएको कारणले हुन्छ। शरीर, तसर्थ, रातको समयमा आफैलाई सार्न वा समायोजन गर्ने विचारबाट प्रभावित हुनुपर्छ जुन यसलाई सबैभन्दा ठूलो सजिलो र सान्त्वना दिन सक्छ।
दुई जीवन धारहरू विशेष गरी उठ्ने र सुत्ने घटनाको साथ गर्नुपर्दछ। यी सौर र चन्द्र धारहरू हुन्। मानिस एक पटकमा एक नाकको प्वालबाट सास फेर्छ। लगभग दुई घण्टाको लागि सौर्य प्रवाह सासको साथ आउँदछ जुन दाँत नासिकाबाट दुई घण्टा सम्म बग्दछ; त्यसोभए त्यहाँ केहि मिनेटको ब्यालेन्सको अवधि हुन्छ र सास परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि चन्द्रमाले सास फेर्छ जुन बायाँ नासिकाबाट जान्छ। सासका माध्यमबाट यी धारहरू जीवनभर वैकल्पिक रूपमा जारी रहन्छन्। उनीहरूको निद्रामा प्रभाव छ। यदि सास फेर्ने क्रममा आउँछ र बायाँ नासिकाबाट जान्छ भने, यो पत्ता लगाउन सकिन्छ कि निद्राको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान दायाँ पट्टि छ, किनकि यसले चन्द्र सास निरुत्साहित बायाँ नासिकाबाट बहाउँदछ। तर यदि, यसको सट्टामा, एक बायाँ पट्टि झुल्नु पर्छ, यो फेला पर्नेछ कि यसले हालको परिवर्तन गर्दछ; सासहरू बायाँ नासिकाबाट प्रवाह गर्न रोकिन्छ र यसको सट्टा दायाँ नासिकाबाट बग्दछ। धाराको स्थानान्तरण स्थान परिवर्तन हुने बित्तिकै लिन सकिन्छ। यदि एक सुत्न सक्दैन भने उसले ओछ्यानमा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गरोस्, तर उसले आफ्नो शरीरलाई कसरी झूट बोल्न चाहन्छ भनेर परामर्श दिनुहोस्।
एक स्फूर्तिदायी निन्द्रा पछि, शरीरको सबै कोशिकाको ध्रुव एकै दिशामा दर्साउँछ। यसले विद्युतीय र चुम्बकीय प्रवाहलाई समान रूपमा कोशहरू मार्फत प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ। तर दिन बित्दै जाँदा विचारहरूले कोषहरूको ध्रुवको दिशा बदल्छ, र राती कोषहरूको नियमितता हुँदैन किनकि तिनीहरू हरेक दिशामा औंल्याउँछन्। ध्रुवीकरणको यो परिवर्तनले जीवन धाराहरूको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न गर्दछ, र जब मस्तिष्क प्रणाली, पिट्यूटरी शरीरको केन्द्रमा दिमागले यसको संचालन सीटलाई कायम राख्छ, यो स्नायु प्रणालीले शरीरलाई आराम गर्नबाट रोक्छ र चुम्बकीय धाराले कोषहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। । निन्द्रा कोषहरू तिनीहरूको सही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ। रोगमा कोषहरू एक भाग वा सम्पूर्ण शरीरमा एक अर्काको विपरित हुन्छन्।
राम्रोसँग निदाउन चाहनेले कुनै प्रश्न सोचेको वा चाखलाग्दो कुराकानीमा भाग लिने वा विवादमा छिर्ने बित्तिकै अवकाश लिनु हुँदैन, न त जब दिमाग व्याकुल छ, रिसाएको छ, वा रुचि आत्मसात गर्ने कुनै चीजमा समाहित भएको छ भने मन यति व्यस्त रहन्छ कि यसले सुरुमा विषय छोड्न अस्वीकार गर्दछ र फलस्वरूप शरीरका अ the्ग र शरीरका अंगहरूलाई आराम र विश्राम पाउनबाट रोक्दछ। अर्को कारण यो छ कि दिमागले एक पटकको लागि यस विषयलाई बोके पछि, यसबाट टाढा बस्न धेरै गाह्रो हुन्छ, र रातको धेरै घण्टा प्रयासमा खर्च हुन सक्छ तर "निद्रामा जान असफल"। यदि दिमागले कुनै विषयको साथ धेरै लिइएको छ भने, विरोधाभासपूर्ण प्रकृतिको सोचाइको केहि अन्य विषय प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, वा एउटा पुस्तक पढ्नुपर्दछ जबसम्म ध्यान लिनेवाला विषयबाट ध्यान लिइनदैन।
सेवानिवृत्त पछि, यदि कसैले ओछ्यानमा राम्रो स्थितिमा पहिले नै निर्धारण गरेको छैन भने ऊ दाहिने तर्फ सबैभन्दा सुलभ र आरामदायी स्थितिमा ढल्नुपर्छ, हरेक मांसपेशीलाई आराम दिनुहुन्छ र शरीरको प्रत्येक अ the्ग एकदमै प्राकृतिक स्थितिमा पर्न दिनुहुन्छ। शरीर चिसो, वा न्यानो नहुने गरी छोड्नु हुँदैन, तर आरामदायी तापमानमा राख्नु पर्छ। त्यसोभए आफ्नो हृदयमा दयालु महसुस गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण शरीरमा भावना विस्तार गर्नुपर्दछ। शरीर को सबै भागहरु प्रतिक्रिया र उदारतापूर्वक न्यानोपन र भावना संग उत्साहित हुनेछ। यदि सचेत सिद्धान्त तब स्वभाविक रूपमा निद्रामा डुब्दैन भने, धेरै प्रयोगहरू निन्द्रामा प्रलोभन गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ।
निन्द्रालाई प्रलोभनमा पार्ने सब भन्दा साधारण विधिहरू मध्ये एक गणना हो। यदि यो प्रयास गरिएको छ भने बिस्तारै गणना गर्नुपर्दछ र प्रत्येक नम्बरलाई मानसिक रूपमा उच्चारण गर्नुपर्दछ ताकि यसको लगातार मान बुझ्न। यसको एकलताबाट मस्तिष्क थकित हुने प्रभाव छ। एक सय पच्चीस सम्ममा निद्रा आइसकेको हुन्छ। अर्को विधि र एक जुन बलियो ईच्छाको साथ धेरै नकारात्मक व्यक्तिको लागि बढी प्रभावकारी हुनुपर्दछ, माथि हेर्नु हो। पलकहरू बन्द हुनुपर्दछ र आँखा माथितिर घुम्नुहोस् ताकि एक इन्च नाकको जरा माथि र पछाडि ध्यान केन्द्रित गर्न। यदि एक यो राम्रोसँग गर्न सक्षम छ, निद्रा सामान्यतया केहि मिनेटमा आउँछ, र प्रायः तीस सेकेन्डमा। आँखा माथि फर्काएर उत्पादित प्रभाव शारीरिक जीवबाट मानसिक जीव बिच्छेदन हो। मनोवैज्ञानिक प्रकृतिमा ध्यान केन्द्रित हुने बित्तिकै शारीरिक दृष्टि हराउँदछ। त्यसोभए सपना वा निद्रा आउँछ। तर उत्तम तरिका र सजिलो भनेको एकको सुत्ने क्षमतामा भरोसा राख्नु र विचलित प्रभावहरू छोड्नु हो; यो आत्मविश्वास र मायालु भावनाको साथ हृदय निद्रा चाँडै आउँदछ।
त्यहाँ केहि शारीरिक घटनाहरू हुन्छन् जुन प्रायः निद्रासँगै आउँछ। श्वसन घटाइएको छ, र पेटको क्षेत्रबाट सास लिनुको सट्टा मानिस वक्ष क्षेत्रबाट सास फेर्छ। नाडी सुस्त हुन्छ र कार्डियक कार्य ढिलो हुन्छ। धेरै उदाहरणहरूमा यो पत्ता लाग्यो कि निद्राको बखत शरीरको आकारमा भिन्नताहरू छन्। शरीरका केही भागहरू आकारमा बढ्छन्, जबकि अरू अ parts्गहरू घट्छन्। शरीरको सतह भाँडाहरू विस्तार हुन्छन्, जबकि दिमागका जहाजहरू साना हुन्छन्। दिमाग पहेंलो हुन्छ र निद्राको बखत संकुचन हुन्छ, तर सचेत सिद्धान्तको फिर्तीमा, यसले अधिक गुलाबी रue वा रudd्ग रंग मान्दछ। जागरण अवस्थामा भन्दा छाला निद्रामा बढी सक्रिय हुन्छ, जुन मुख्य कारण बेडरूममा वायु जागेको घण्टाको भन्दा बढी द्रुत हुन्छ। तर छाला रगतको दाँतले घेरिएको छ भने, आन्तरिक अ .्गहरू एनीमियाको स्थितिमा छन्।
शरीरका अ in्गहरूमा आकारको भिन्नताको कारण यो हो कि जब सचेत सिद्धान्त दिमागबाट अलग हुन्छ, मस्तिष्कको कार्य ढिलो हुन्छ, रगतको संचार घट्छ, र सचेत सिद्धान्तको काम गर्ने अंगको रूपमा, मस्तिष्क आराम छ भने। होइन शरीरको परिधि संग। यसको कारण यो छ कि जब शरीरको अभिभावक, सचेत सिद्धान्त, सेवानिवृत्त भएको छ र यसको सक्रिय अंगहरू आराममा रहन्छ, शरीरको रूपको समन्वयात्मक चेतना सिद्धान्त ले कार्य गर्दछ र शरीरलाई धेरै खतराहरूबाट बचाउँछ यो निद्राको समयमा उजागर हुन्छ।
यी धेरै खतराहरूको कारण छालाको बृद्धि भएको छ जसले यसलाई सक्रियता अवस्थाको तुलनामा प्रभावहरूप्रति बढी संवेदनशील बनाउँदछ। ब्यूँझिएको अवस्थामा मोटरको स्नायु र स्वैच्छिक मांसपेशीहरूले शरीरको नियन्त्रण लिन्छ, तर जब मानवको सचेत सिद्धान्त सेवानिवृत्त हुन्छ, र मोटर स्नायुहरूको प्रणाली स्वतन्त्र मांसपेशीहरू र शरीरको चाल चालना नियन्त्रण गर्दछ, अनैच्छिक स्नायुहरू र शरीरको मांसपेशीहरू खेलमा आउँदछन्। यसै कारणले ओछ्यानमा रहेको शरीरलाई मानव स्थितिको सिद्धान्तको सहायता बिना नै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सारियो। अनैच्छिक मांसपेशीहरूले शरीरलाई केवल प्राकृतिक नियमहरू द्वारा प्रेरित गरिएको रूपमा र शरीरलाई यी कानूनहरूमा समायोजित गर्न सार्दछ।
अन्धकार सुत्नको लागि बढी अनुकूल छ किनकि शरीरको परिधि का नसहरू अन्धकारमा असर गर्दैन। स्नायुहरूमा हल्का अभिनयले दिमागमा छापहरू पुर्‍याउँछ जुन सपनाका धेरै प्रकारहरूको सुझाव दिन सक्छ, र सपनाहरू प्रायः केही शोरको परिणाम हुन्, वा शरीरमा प्रकाश अभिनय। कुनै आवाज, स्पर्श वा बाह्य प्रभाव, एकैचोटि दिमागको आकार र तापमानमा परिवर्तन ल्याउँछ।
निद्रा पनि लागू पदार्थको द्वारा उत्पादन गरिन्छ। उनीहरूले स्वस्थ निद्रा ल्याउँदैनन्, जस्तो कि एक मादक पदार्थ वा ड्रग्सले स्नायुहरूलाई सुस्त बनाउँछ र सचेत सिद्धान्तबाट बिच्छेद गर्दछ। चरम अवस्थामा बाहेक ड्रग्स प्रयोग गर्नु हुँदैन।
पर्याप्त निन्द्रालाई शरीर दिइनु पर्छ। घण्टा संख्या सटीकता संग सेट गर्न सकिदैन। कहिलेकाँही हामी चार वा पाँच घण्टाको निद्रा पछि अरु धेरै स्फूर्ति महसुस गर्दछौं भन्दा दुई पटक संख्या भन्दा अन्य समयमा। निन्द्राको लम्बाइको रूपमा अनुसरण गर्न सकिने एकमात्र नियम भनेको यथोचित घडीमा अवकाश लिनुपर्दछ र शरीर आफै नबढुन्जेल निदाउनु हो। ओछ्यानमा जागा रहनु विरलै उपयोगी हुन्छ र प्रायः हानिकारक हुन्छ। निद्राको लागि उत्तम समय, तथापि, साँझको १० देखि बिहान छ बजेको आठ घण्टा हो। लगभग १० बजे पृथ्वीको चुम्बकीय प्रवाह खेल्न सुरू हुन्छ र चार घण्टासम्म रहन्छ। यस समयमा, र विशेष गरी पहिलो दुई घण्टामा, शरीर वर्तमानको लागि धेरै संवेदनशील हुन्छ र यसबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा प्राप्त गर्दछ। दुई बिहान अर्को अर्को वर्तमान खेल सुरु हुन्छ जुन जीवनसँग शरीरलाई शुल्क लगाउँछ। यो वर्तमान करिब चार घण्टासम्म जारी रहन्छ, त्यसैले यदि निद्रा दस बजेतिर सुरु भयो भने, दुई सबै कोशिका र शरीरका अ by्गहरू द्वारा नकारात्मक चुम्बकीय प्रवाहद्वारा आराम र नुहाउने थिए; दुई बजेमा विद्युतीय धाराले शरीरलाई उत्प्रेरित र उत्साहित गर्न थाल्छ, र छ बजे सम्म शरीरको कोशिकालाई यति चार्ज गरीयो र क्रियाशील बनाइनेछ कि आफैंलाई मनको सचेत सिद्धान्तको ध्यानाकर्षण गराउन। ।
निन्द्रा र अनिद्रा निरुपयोगी हुन्छन्, किनकि जब शरीर क्रियाशील रहन्छ र स्वैच्छिक स्नायु र मांसपेशिहरु द्वारा नियन्त्रित छ, प्रकृतिले फोहोर उत्पादनहरु लाई हटाउन र हटाउन सक्दैन, न त सक्रिय जीवनको पोशाकले शरीरलाई गरेको क्षतिलाई मर्मत गर्न सक्छ। यो केवल तब गर्न सकिन्छ जब अनैच्छिक स्नायु र मांसपेशिको शरीरमा नियन्त्रण हुन्छ र प्राकृतिक आवेगद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
अत्यधिक निद्रा पर्याप्त निन्द्रा जस्तै खराब छ। जो धेरै निन्द्रामा व्यस्त हुन्छन् तिनीहरू प्रायः सुस्त र अल्छी दिमागका हुन्छन् र अल्छी भएका, थोरै बौद्धिक, वा गोरामेन्ड्स हुन् जसले निद्रा र खानमा रमाउँछन्। कमजोर दिमाग सजिलै थकित हुन्छ र कुनै पनि नीरसताले निद्रा जगाउँछ। धेरै निन्द्रामा लाग्नेहरूले आफैलाई चोट पुर्‍याउँछन् किनकि अत्यधिक निद्राको साथ शरीरका मुख्य अंगहरू र ऊतहरूको निष्क्रियता पनि हुन्छ। यसले एन्फीफिलमेन्टमा जान्छ, र गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। यसले पित्ताशयको पित्तलको कार्य रोक्न लगाउँछ, र पित्तको स्थिरताको बेला यसको तरल भाग अवशोषित हुन्छ। अत्यधिक निन्द्रा, एल्लिमेन्टरी नहरको स्वरलाई कमजोर बनाएर कब्जको विकास हुन्छ।
यद्यपि धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूले निद्राको सम्पूर्ण अवधिमा सपना देख्छन्, त्यत्ति धेरै विरलै हुन्छ, र यदि हो भने, तिनीहरू थकित र असन्तुष्ट ब्यूँझन्छन्। राम्रोसँग निदाउनेहरूसँग सपनाको दुई काल हुन्छ। पहिलो तब हो जब दिमाग र इन्द्रियको संकाय त्यागिएको छ। यो सामान्यतया केहि सेकेन्ड देखि एक घण्टा सम्म हुन्छ। दोस्रो अवधि जागरणको हो जुन सामान्य परिस्थितिहरूमा केहि सेकेन्डबाट आधा घण्टा सम्म हुन्छ। कुनै पनि हिसाबले सपनाको स्पष्ट लम्बाईले उपभोग गरेको वास्तविक समयलाई जनाउँछ, सपनाको समय समय भन्दा फरक फरक हुन्छ किनकि हामी यसलाई ब्यूँझने अवस्थामा पाउँछौं। धेरैले सपनाहरुमा अनुभव गरेका छन् जुन सपनाहरुमा वर्षौं लाग्यो वा जीवनको समय लाग्यो वा उमेरहरू पनि लाग्यो, जहाँ सभ्यताहरु उदय र पतन भएको देखिन्थ्यो, र सपनाकार यति तीव्रतामा शंका भन्दा परेको जस्तो देखिए, तर ब्यूँझदा उनले पाए कि बर्षहरु वा उमेरहरू केहि सेकेन्ड वा मिनेट पछि सबै भएको थियो।
सपनाको लम्बाईको असंगोषका कारण जब हामी यो जान्दछौं, कारण यो हो कि हामीले दूरी र समय अनुमान गर्ने बानीका लागि हामीले हाम्रो अवधारणाका अंगहरूलाई शिक्षित गरेका छौं। सतही संसारमा सचेत सिद्धान्तले कुनै सीमा बिना अस्तित्वको अवलोकन गर्दछ, जबकि हाम्रो अ organs्ग रगतको संचार र समय र दूरीको घण्टा, र स्नायु तरलताको संचलनबाट अनुमान गर्दछ किनकि यो बाह्य विश्वको सम्बन्धमा प्रयोग भएको छ। एक सपना केवल मानसिक विमान मा भित्री अंगहरु को माध्यम बाट यसको समारोह गर्न भौतिक विमान मा बाह्य भौतिक अंगहरु को माध्यम बाट कार्य बाट सचेत सिद्धान्त को हटाउनु हो। प्रक्रिया र पारित गर्न सचेत सिद्धान्त द्वारा अवलोकन गर्न सकिन्छ जब दिमागले आफूलाई शरीरका अ organs्ग र इन्द्रियबाट कसरी अलग गर्ने सिक्छ।
शरीर पूरै शरीर एक हो, तर यो धेरै शरीरहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा प्रत्येक शरीरको अवस्था एक अर्काको भन्दा फरक हुन्छ। त्यहाँ परमाणु पदार्थ रहेको छ जसको पूरै शरीर बनेको छ, तर डिजाइनको सिद्धान्त अनुसार समूहीकृत छ। यो एक अदृश्य शरीर हो। तब आणविक शरीर हुन्छ, जुन एस्ट्रेल डिजाइन सिद्धान्त हो जुन अनुसार परमाणुहरू समूहबद्ध हुन्छन् र यसले सम्पूर्ण शरीरलाई रूप दिन्छ। त्यसोभए त्यहाँ जीवन शरीर छ, जो आणविक शरीरको माध्यमबाट स्पिलिक शरीर हो। अझै अर्को अर्को इच्छा शरीर हो जुन एक अदृश्य जैविक शरीर हो जुन सबै अघिल्लो निकायहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ। यी बाहेक त्यहाँ दिमाग शरीर छ, जुन एक ज्योतिमा चम्किरहेको छ र सबैमा नै उल्लेख गरिएको छ।
अब जब सचेत सिद्धान्त वा दिमाग शरीर भौतिक संसारमा इन्द्रियहरु मार्फत काम गरिरहेको छ, ज्योतिको शरीर जस्तै यो अन्य शरीरहरुमा यसको प्रकाश बन्छ र को माध्यम बाट चम्कन्छ र उनीहरु र इन्द्रियहरु र अंगहरु लाई कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। त्यस राज्यमा मानिस ब्यूँझनु भनेर भनिन्छ। जब दिमागको प्रकाश शरीर लामो अवधिको लागि सक्रिय गरिएको छ, सबै तल्लो शरीरहरू प्रकाशद्वारा पराजित हुन्छन् र प्रतिक्रिया दिन असक्षम हुन्छन्। यस समयसम्म तिनीहरू दिमागको प्रकाश शरीरमा ध्रुवीकरण भएका थिए र अब तिनीहरू निराश हुन्छन् र प्रकाश शरीर आणविक साइकिक शरीरमा परिणत हुन्छ जुन बाह्य इन्द्रियहरूको भित्री सिट हो र साइकिक प्लेनको इन्द्रियहरू समावेश गर्दछ। यो तब हो कि हामी सपना देख्छौं र सपनाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् त्यहाँ अवस्थित हुन्छन्; र सपनाहरु उठ्ने धेरै कारणहरु बाट छन्।
कहिलेकाहीं दुःस्वप्नको कारण पाचन तंत्रको कार्य गर्न असमर्थता र मस्तिष्कमा बढाइचढाइ तस्बिरहरू फ्याँक्ने झुकावका कारण हुन्छ जुन दिमागको सचेत सिद्धान्तले देख्छ। रातीको रक्तसञ्चार र स्नायु प्रणालीको बन्देज वा संवेदी तंत्रिकाबाट मोटर नसाको विच्छेदनको कारण दुःस्वप्नहरू हुन सक्छ। यो विच्छेदन स्नायु को खींच को कारण वा तिनीहरूलाई बिच्छेदन द्वारा हुन सक्छ। अर्को कारण इनक्यूबस हो जसले शरीरको अधिकार लिन्छ। यो अपच वा अव्यवस्थित कल्पना द्वारा उत्पादित सपना होईन, तर यो गम्भीर प्रकृतिको हो, र यसको सावधानी अपनाउनुपर्दछ, अन्यथा मध्यमता परिणाम हुन सक्छ, पागलपन होइन भने, र यो ज्ञात छ कि त्यस्ता दुःस्वप्नले कहिलेकाँही परिणाम दिन्छ। मृत्यु
सोम्नाम्बुलिस्टहरूले प्राय: सामान्य ब्यूँझिने जीवनका सबै इन्द्रियहरू र संकायहरू प्रायः प्रयोग गर्दछन्, र कहिलेकाँही सोम्नाम्बुलिस्टको ब्यूँझने जीवनमा नदेखिने सत्यता देखाउन सक्छन्। एक ओछ्यानवाट आफ्नो ओछ्यानबाट उठ्न सक्छ, पोशाक, आफ्नो घोडा काठी र उत्तेजित अवस्था जहाँ ऊ उठेको राज्य मा उसले प्रयास गर्न को लागी मा चढ्न सक्छ; वा ऊ सुरक्षित रूपमा चिप्लेटीमा वा चिसो उचाइमा चढ्न सक्दछ जहाँ जाग्ने भएमा ऊ उद्यम गर्न पागलपन हुनेछ। वा उसले पत्रहरू लेख्न सक्छ र कुराकानीमा संलग्न हुन सक्छ, र ब्यूँझिसकेपछि पनि के भएको हो भन्ने बारे पूर्णतया अनजान हुन सक्छ। सोम्नम्बुलिजमको कारण सामान्यतया शरीरको रूपको समन्वयित चेतना सिद्धान्त द्वारा नियन्त्रणको कारण हुन्छ जसद्वारा अनैच्छिक स्नायुहरू र मांसपेशीहरू सारिन्छ, दिमागको सचेत सिद्धान्तको हस्तक्षेप बिना। यो somnambulistic कार्य मात्र एक प्रभाव हो। यसको कारण बिचारका केही प्रक्रियाहरू हुन् जुन यसअघिको स्थानमा भएका थिए, या त अभिनेताको दिमागमा वा अर्को व्यक्तिको दिमागले सुझाव दिएका हुन।
सम्मनबुलिजम सम्मोहनको एक रूप हो, सामान्यतया केही विचारहरू बोक्ने कार्य जुन शरीरको रूप सिद्धान्तमा प्रभावित हुन्छ, जब कुनै व्यक्तिले कुनै कार्य वा चीजको सोचविचार गरी सोच्दछ उसले आफ्नो शरीरको डिजाइन वा फारम सिद्धान्तमा यी विचारहरूलाई प्रभावित गर्दछ। । अब जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो फारम सिद्धान्तलाई यति प्रभावित गरी रातीको लागि रिटायर हुन्छ, उसको चेतना सिद्धान्त मस्तिष्कको शासित सीट र केन्द्रबाट पछि हट्दछ र स्वैच्छिक स्नायु र मांसपेशीहरू आराम हुन्छ। त्यसोभए यो हो कि अनैच्छिक स्नायु र मांसपेशीहरूले चार्ज लिन्छन्। यदि यी वेकिंग स्टेटमा सोच्ने सिद्धान्तबाट प्राप्त गरिएका प्रभावहरूबाट पर्याप्त मात्रामा प्रभावित छन् भने, सम्मोहित विषयले आफ्नो अपरेटरको आज्ञापालन गरेमा तिनीहरू आफैं यी विचारहरू वा प्रभावहरू निश्चित रूपमा पालना गर्दछन्। यसैले कि सोम्नाम्बुलिस्टले प्रदर्शन गरेका जंगली पराक्रमहरू ब्यूँझने अवस्थाको बखत फार्मको बडीमा लगाइएको कुनै दिनको सपनाको पूर्ति हुन्छन्, जसले सोम्नाम्बुलिस्ट स्वयं सम्मोहनको विषय हो भनेर देखाउँदछ।
तर यो आत्म सम्मोहन सधैं एक दिनको सपना, वा जंगली कल्पना, वा केवल जीवन जगाउने सोच को नतिजा हो। कहिलेकाँही सचेत सिद्धान्त एउटा गहिरो सपनाको राज्यमा हुन्छ र त्यो गहिरो सपनाको स्थितिको प्रभावलाई शरीरको समन्वयित सचेत सिद्धान्तमा स्थानान्तरण गर्दछ। त्यसोभए, यदि यस शरीरले प्राप्त गरेको प्रभावहरूमा कार्य गर्दछ भने, सोम्नाम्बुलिज्मको घटनालाई केही जटिल र गाह्रो प्रदर्शनहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ, जस्तै गणित गणनामा मानसिक शल्यक्रियाको आवश्यक पर्दछ। यो दुबै व्यक्तित्वका कारणहरू हुन्, तर त्यहाँ धेरै अन्य कारणहरू पनि छन्, जस्तै दोहोरो व्यक्तित्व, व्याकुलता वा सम्मोहनको माध्यमबाट अर्काको इच्छालाई पालन गर्ने जसले सम्मोहनद्वारा शरीरलाई स्वचालित रूपमा निर्देशित गर्न सक्छ।
सम्मोहन निद्राको एक रूप हो जुन अर्कोको दिमागमा अभिनय गर्नेको इच्छाले ल्याएको हुन्छ। प्राकृतिक घटनामा ट्रान्सपायर गर्ने समान घटना सम्मोहित कृत्रिम रूपले हिप्नोटिस्टद्वारा उत्पादित हुन्छ। सम्मोहितद्वारा अनुसरण गर्ने धेरै विधिहरू छन्, तर परिणामहरू उस्तै छन्। सम्मोहनमा अपरेटरले आँखाका पलकहरू, सामान्य ढिलोपन, र सुझावको आधारमा वा थोरै शक्तिले गर्दा विषयको चेतन सिद्धान्तलाई मस्तिष्कको सीट र केन्द्रबाट हटाउन बाध्य पार्छ, र यसरी अनैच्छिक स्नायुहरूको नियन्त्रण हुन्छ। र शरीर को मांसपेशीहरु आत्मसमर्पण, र चेतना सिद्धान्त यसको मानसिक केन्द्रहरु र सनसनी को केन्द्रहरु बाट काटिएको छ, र गहिरो निद्रा मा गिर। तब अपरेटरले अर्कोको दिमागको स्थान लिन्छ र शरीरको फारम सिद्धान्तको चालहरूलाई आदेश दिन्छ जसले अनैच्छिक आन्दोलनहरू नियन्त्रण गर्दछ। यो फारम सिद्धान्तले अपरेटरको सोचाइमा सजिलै प्रतिक्रिया दिन्छ यदि विषय राम्रो छ भने, र अपरेटरको दिमाग शरीरको अटोमेटनको लागि हुन्छ जुन मनको आफ्नो सचेत सिद्धान्त हो।
सम्मोहित विषयले समोम्बुलिज्मका सबै घटनाहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ र धीरजको अझ अद्भुत घटनाहरू प्रदर्शन गर्न पनि सकिन्छ किनकि सम्मोहनले विषय प्रदर्शन गर्नका लागि इच्छुक भए त्यस्ता कार्यहरू आविष्कार गर्न सक्दछ, जबकि, सोम्नम्बुलिस्टको चालहरू अघिल्लो विचारमा निर्भर हुन्छ, जे हुन सक्छ कुनै पनि परिस्थिति वा शर्तमा कहिल्यै सम्मोहित हुनु हुँदैन, किनकि यसले उसलाई र उसको शरीरलाई कुनै प्रभावको खेललाई प्रस्तुत गर्दछ।
यो सम्भव छ कि कसैलाई आत्म सम्मोहनबाट फाइदा लिन यदि यो चलाखीपूर्वक गरियो भने। शरीरलाई निश्चित शल्यक्रिया गर्न आदेश दिएपछि यो अझ राम्रोसँग आफ्नै कारणको प्रभावमा ल्याइनेछ, र तर्क सिद्धान्तको लागि जीवन र शरीरको कार्यहरू निर्देशित गर्न सजिलो हुनेछ यदि शरीर प्रतिक्रिया दिनको लागि यति प्रशिक्षित छ भने। सबै समयमा तर्क सिद्धान्त। त्यस्तै एक अपरेशन बिहान जाग्ने समय हो जुन दिमागले शरीरलाई अवकाश लिनु अघि ब्यूँझाउने आदेश दियो, र यो जाग्ने बित्तिकै उठ्नेछ र तुरुन्तै नुहाउँदछ र लुगाफाटा दिन्छ। दिनको कुनै खास समयमा शरीरलाई केही कार्यहरू गर्न निर्देशन दिएर यसलाई टाढासम्म पुग्न सकिन्छ। त्यस्ता प्रयोगको लागि क्षेत्र ठूलो छ र शरीरलाई अति नै संवेदनशील बनाइन्छ यदि ती अर्डरहरू निद्रा अघि रातमा पहिलो पटक दिइन्छ।
हामी निन्द्राबाट धेरै फाइदाहरू पाउँछौं, तर यसका खतराहरू पनि छन्।
निन्द्रामा जीवन शक्ति गुमाउने खतरा हुन्छ। यो एक आध्यात्मिक जीवन बिताउन कोसिस गर्नेहरु को लागी एक धेरै गम्भीर बाधा हुन सक्छ, तर यो भेटिन्छ र पार गर्नै पर्छ। जब शरीरको नैतिक शुद्धता एक निश्चित समयावधिको लागि बनाईएको हुन्छ, त्यो शरीर इन्धनहरूको अदृश्य संसारको अस्तित्वका विभिन्न वर्ग र प्रभावहरूको लागि आकर्षणको वस्तु बन्छ। यी रातमा राती निद्रामा शरीरमा आबद्ध हुन्छन् शरीरको सचेत समन्वय सिद्धान्तहरूमा कार्य गर्दछ, जसले शारीरिक अनैच्छिक स्नायु र मांसपेशिहरू नियन्त्रण गर्दछ। शरीरको यो फारम सिद्धान्तमा काम गर्नाले, जैविक केन्द्रहरू जगाउँदछन् र उत्प्रेरित हुन्छन्, र अवांछनीय परिणामहरू द्वारा अनुसरण गरिन्छ। जीवन शक्ति को हानि सकारात्मक रोक्न सकिन्छ र यसको कारण प्रभावहरु पहुँच हुनबाट रोके। जो शरीरको निन्द्रामा सचेत छ उसले पक्कै पनि त्यस्ता सबै प्रभावहरू र संस्थाहरूलाई टाढा राख्छ, तर जो सजग छैन उसले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न सक्छ।
महत्त्वपूर्ण घाटा प्रायः ब्यूँझिएको जीवनको समयमा आफ्नै विचारहरूको परिणाम हो, वा उसको दिमागमा प्रवेश गर्ने विचारहरू र त्यसले श्रोताहरूलाई दिन्छ। यसले समन्वय फारम सिद्धान्तलाई प्रभाव पार्छ र somnambulistic शरीर जस्तै, यसले स्वचालित रूपमा यसमा प्रभावित विचारको मुनिको अनुसरण गर्दछ। त्यसोभए, जसले निन्द्रामा आफूलाई जोगाउनुहुन्छ उसले जीवनलाई जगाउन शुद्ध दिमाग जोगाउछ। उसको दिमागमा उठ्ने विचारहरू मनोरंजन गर्नुको सट्टा, वा जसलाई अन्य व्यक्तिले सुझाव दिन सक्छ, उसले उनीहरूलाई बिदा गरोस्, श्रोतालाई अस्वीकार गरेर उनीहरूको अनुहारमा नपरोस्। यो एक उत्तम एड्स मध्ये एक हुनेछ र स्वस्थ र लाभदायक निन्दन गराउनेछ। जीवन शक्ति गुमाउँदा कहिलेकाँही आफ्नै विचारहरू वा अरूको विचारहरू भन्दा अन्य कारणहरूले गर्दा हुन्छ। यो रोक्न सकिन्छ, यद्यपि यसले समय लिन्छ। यति धेरै पीडित व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई कुनै खतरनाक अवस्थामा पुग्न सहयोगको लागि बोलाउन भनौं, र कुनै तर्क नचाहने आगन्तुकलाई प्रस्थान गर्न आदेश दिन उसले आफ्नो तर्क सिद्धान्त पनि चार्ज गरोस्; र सहि कमाण्ड दिइएको छ भने यो प्रस्थान गर्नुपर्नेछ। यदि केहि आकर्षक व्यक्ति सपनामा देखा पर्दछन् भने उनले सोध्नु पर्छ: "तिमी को हौ?" र "तपाई के चाहानुहुन्छ?" यदि यी प्रश्नहरू जबरजस्ती सोधिएको छ भने, कुनै पनि इकाईले जवाफ दिन अस्वीकार गर्न सक्दैन, र आफैलाई र तिनीहरूको उद्देश्यलाई ज्ञात गर्न। जब यी प्रश्नहरू आगन्तुकलाई सोधिन्छ, यसको सुन्दर रूपले प्राय जसो घृणित आकारलाई ठाउँ दिन्छ, जुन क्रोधित भयो जसले गर्दा यसको वास्तविक प्रकृति देखाउन बाध्य हुनुपर्‍यो, स्नैर्लस वा क्राइकहरू र अनिच्छुक रूपमा गायब हुन्छन्।
माथिका तथ्यहरूसँग दिमागलाई चार्ज गर्दै, र निद्राको यस्तै खतरा रोक्नको लागि, सेवानिवृत्त हुँदा हृदयमा दयालु भावना हुनुपर्दछ र कोषहरू रमाइलो न्यानोपनको साथ सम्पूर्ण शरीरमा विस्तार गर्नुपर्दछ। यसैले शरीरबाट शरीरलाई केन्द्रको रूपमा अभिनय गर्दै उसले वरपरको वातावरणलाई सकारात्मक चरित्रको मायालु सोचाइमा चार्ज गर्ने कल्पना गरोस्, जुन उहाँबाट टाढा हुन्छ र कोठाको प्रत्येक भाग भर्छ, जुन प्रकाशबाट उज्यालो हुन्छ इलेक्ट्रिक ग्लोब। यो उसको आफ्नै वातावरण हुनेछ, जसबाट ऊ चारैतिरबाट घेरेको छ र जसमा ऊ कुनै खतरा बिना सुत्न सक्छ। केवल उसमा आउने खतरा भनेको उसको आफ्नै विचारका विचारहरू हुन्। अवश्य पनि, यो अवस्था एकैचोटि प्राप्त हुँदैन। यो निरन्तर प्रयासको परिणाम हो: शरीरको अनुशासन, र दिमागको अनुशासनको।
त्यहाँ निद्राको राशिफल छ र त्यहाँ बत्तीको राशी छ। जागृत जीवनको राशि क्यान्सर (♋︎) बाट मकर (♑︎) लाईब्रेरीको माध्यमबाट (♎︎) हो। निद्राको राशि मकर (♑︎) बाट क्यान्सर (♋︎) बाट मेष (a) बाट हुन्छ। हाम्रो ब्यूँझिने जीवनको राशि क्यान्सर (♋︎) मा शुरू हुन्छ, सास, हाम्रो सचेत हुनुको पहिलो संकेतको साथ। यो गहिरो निद्रा राज्यबाट बिहान वा हाम्रो दैनिक आराम पछि पहिलो प्रस्थान हो। यो अवस्थामा एक सामान्यतया रूपहरू वा जागृत जीवनको विवरणहरूको बारेमा सचेत हुँदैन। केवल एक चीजको जसमा सचेत छ आरामदायक अस्तित्वको अवस्था हो। सामान्य मानिससँग यो धेरै आरामदायी अवस्था हो। त्यहाँबाट, सोच सिद्धान्त अधिक सचेत स्थितिमा जान्छ, जुन साइन लियो (♌︎), जीवनले प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस राज्यमा र colors्गहरू वा चमकदार वस्तुहरू देख्न सकिन्छ र जीवनको प्रवाह र ईन्स्रस महसुस हुन्छ, तर सामान्यतया कुनै निश्चित रूप बिना। दिमागले शारीरिक सम्बन्धसँग यसको सम्बन्ध पुनः सुरु गरेपछि यसले साइन कन्या (♍︎), फारममा जान्छ। यो राज्यमा हो कि अधिकांश व्यक्तिहरू जागै जीवनमा फर्केर हेर्छन्। फारामहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, पुरानो सम्झनाहरूको समीक्षा गरिन्छ, र शारीरिक इन्द्रियहरूमा निहित छापहरू मस्तिष्कको ईथरमा तस्बिरहरू निम्त्याउँछन्; यसको सिटबाट दिमागले इन्द्रियका यी प्रभावहरू र सुझावहरू अवलोकन गर्दछ र सपनाहरूका सबै प्रकारहरूमा उनीहरूको व्याख्या गर्दछ। यस सपनाको अवस्थाबाट जीवन जगाउनको लागि एक चरण मात्र हो, त्यसपछि दिमाग साइन लाइब्रेरी (♎︎), सेक्समा आफ्नो शरीरको अनुभूतिमा जागृत हुन्छ। यो चिन्ह मा यो दैनिक जीवन को सबै गतिविधिहरु को माध्यम बाट जान्छ। पुस्तकालय (♎︎), सेक्सको शरीरमा यसको शरीरमा ब्यूँझाइएपछि, यसको इच्छाहरू चिन्ह वृश्चिक (♏︎), इच्छाको माध्यमबाट प्रकट हुन्छन्। यीसँग जोडिएको छ र जीवन जगाउनको लागि सामान्य विचारहरू द्वारा अभिनय गरिएको छ, हस्ताक्षर (♐︎), विचारमा, जुन दिनभरि जारी रहन्छ र दिमागमा सचेत सिद्धान्त आफैमा डुब्दछ र सचेत हुन बन्द हुन्छ। संसार यो साइन मकरमा स्थान लिन्छ (individ), व्यक्तित्व। मकर (♑︎) ले गहिरो निद्राको राज्य प्रतिनिधित्व गर्दछ र क्यान्सर (♋︎) को रूपमा उही विमानमा छ। तर जहाँ मकर (♑︎) ले गहिरो निन्द्रामा जानेलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, क्यान्सर (♋︎) ले यसको बाहिर आउने प्रतिनिधित्व गर्दछ।
निद्रा राशि मकर (♑︎) बाट क्यान्सर (♋︎) बाट मेष (a) मार्फत हो। यसले निद्राको अप्रमाणित ब्रह्माण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, किनकि राशिफलको तल्लो आधा भागले जागृत जीवनको प्रकट ब्रह्माण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि कसैले यो अव्यवस्थित अवस्थाबाट अवकाश लिएपछि ऊ रिटायर हुन्छ भने उनी जागृतिमा स्फूर्ति पाउँछन् किनकि यो यति गहिरो निद्रा अवस्थामा छ, यदि यो एक व्यवस्थित ढंगले पारित गरियो भने, ऊ आत्माको उच्च गुणहरू र संकायको सम्पर्कमा आउँछ र प्राप्त गर्दछ। ती निर्देशनहरू जसले उनलाई आउँदो दिनमा नयाँ शक्ति र हर्षको साथ काम गर्न सक्षम बनाउँदछ, र जुन उनले भेदभाव र दृढताको साथ कार्यान्वयन गर्दछ।
निद्राको राशिफल संख्यात्मक राज्य हो; उठ्ने राशिले अभूतपूर्व संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। निद्राको राशिमा व्यक्तित्व साइन मकर वा गहिरो निद्रा भन्दा पर जान सक्दैन, अन्यथा यो व्यक्तित्व हुन बन्द हुन्छ। यो क्यान्सर (♋︎) मा यसलाई बाट जागृत नभएसम्म यो सुस्त अवस्था मा रहन्छ। व्यक्तित्व शान्त छ जब त व्यक्तित्व इसलिए निद्रा राशिबाट लाभहरू प्राप्त गर्दछ। व्यक्तित्व तब व्यक्तित्व मा प्रभावित सबै फाइदाहरु जो यसले प्राप्त गर्छ।
एक जो जाग र निद्राको राशि को जान्ने थियो, हामी अक्सर सम्मिलित चित्र को संदर्भ हुनेछ शब्द। हेर्नुहोस् शब्द, भोल्यूम ,, न।,, मार्च, १4००, र भोल्यूम ,, न। १, अप्रिल, १5००1. चित्र 30 र 32 चिन्ता लिनुपर्दछ, किनकि उनीहरूले जागिर र निद्रा अवस्थाका धेरै प्रकार र डिग्रीहरू सुझाउनेछन् जसको माध्यमबाट प्रत्येक मानिस आफ्नो स्वास्थ्य, अवस्था र कर्मको आधारमा पारित गर्दछ। ती दुबै व्यक्तित्वमा चारजना मानिस प्रतिनिधित्व हुन्छन्, ती मध्ये तीन जना ठूलो मान्छे भित्र रहेको हुन्छ। यस कागजको विषयवस्तुमा लागू गरिएको, यी चारजना व्यक्तिहरूले चार राज्यहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् जुन जाग्नेबाट गहिरो निद्रामा बित्दछ। सब भन्दा कान्छो र पहिलो मानिस शारीरिक हो, पुस्तकालयमा खडा हुन्छ (standing), जो आफ्नो शरीरद्वारा कुमारी-वृश्चिक (♍︎ – ♏︎), फार्म र इच्छाको विमानमा सीमित छ, ठूलो राशिको। दोस्रो आकृति मनोवैज्ञानिक मानिस हो, जसमा भौतिक मानिस समावेश हुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक मानिस साधारण सपनाको राज्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो साधारण सपनाको स्थिति, र मनोवैज्ञानिक मानिस, आध्यात्मिक मानिसका लक्षणहरू सिंह-सिंह (सीओ) मा सीमित छ, र मानसिक व्यक्तिको लक्षण क्यान्सर-मकर (♋︎ – ♑︎), र यो भित्र छ यो मानसिक संसारको क्षेत्र जुन साधारण मानिस सपनामा देख्छ। यस राज्यमा लिंगा शरिरा, जुन डिजाइन वा फारम बन्ने हो, शरीर हो जुन प्रयोग गरिन्छ र जसको माध्यमबाट सपनाको अनुभव हुन्छ। सपनाहरूमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूले यस राज्यलाई चिनिन्छन् जहाँ कुनै प्रकारको चमक वा विविधता हुँदैन। फारमहरू हेरिन्छ र इच्छाहरू महसुस हुन्छन्, तर रंगहरू अनुपस्थित छन् र फारामहरू सबै रंगका रूपमा देखिन्छन्, जुन सुस्त खैरो वा खरानी रूप हो। यी सपनाहरू सामान्यतया अघिल्लो दिनको विचारहरू वा त्यस समयमा शरीरको संवेदनाहरूले सुझाव दिएका हुन्छन्। वास्तविक सपनाको अवस्था, तथापि, हामीले के माथिको प्रतीक हो, माथि उल्लेखित लेखहरूमा मानसिक मानिस भनिन्छ। मानसिक मानिसमा उसको मानसिक राशिमा मानसिक र शारीरिक पुरुषहरू सम्बन्धित राशिमा समावेश गर्दछ। उसको राशिफलमा मानसिक मानिस लियो-सागिट्री (♌︎ – ♐︎) को जीवनमा फैलिएको छ, जीवन-सोच, ठूलो राशिको। यो आध्यात्मिक राशिको क्यान्सर-मकर राशि (♋︎ – ♑︎) को विमानमा रहेको छ, आध्यात्मिक मानिसको बिचमा बाध्य छ। यो मानसिक मानिस हो जसले साधारण मानिसद्वारा अनुभव गरिएको सपनाको जीवनको सबै चरणहरू समावेश गर्दछ र सीमित गर्दछ। केवल असाधारण अवस्थामा आध्यात्मिक व्यक्तिबाट चेतना संचार प्राप्त गर्दछ। यो मानसिक मानिस वास्तविक सपनाको शरीर हो। यो साधारण मानिसमा यत्तिको निर्विवाद छ, र उसको ब्यूँझिएको जीवनमा यति अपरिभाषित छ कि यसमा सचेत र बुद्धिले यसका लागि काम गर्न कठिन छ, तर यो शरीर हो जुन उहाँ मृत्यु पछि स्वर्गको अवधि बित्नुहुन्छ।
को एक अध्ययन द्वारा संख्या .० र 32, यो देखिने छ कि inverted सही कोण त्रिकोण सबै राशि के लिए लागू होता है, प्रत्येक को लागी प्रत्येक को लागी, तर लाइनहरु (♋︎ – ♎︎) र (♎︎ – the) एकै सापेक्ष स at्केत मा सबै राशिफल पार। यी रेखाहरूले ब्यूँझिएको जीवन र यसको प्रस्थान, शरीरमा आउँदै गरेको र यसलाई छोड्नेको सम्पर्क देखाउँदछ। तथ्या .्कले उनीहरूको बारेमा भन्दा बढि सुझाव दिन्छ।
जसले निन्द्राबाट लाभान्वित हुने छ - जसको फाइदा उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा प्रतिक्रिया देखाउँदछ, अवकाश लिनु अघि पन्ध्र मिनेटदेखि एक घण्टा ध्यानको लागि राख्नु राम्रो हुन्छ। ब्यापार गर्ने व्यक्तिलाई ध्यान दिन एक घण्टा लाग्ने समय खेर फालिएको जस्तो लाग्न सक्छ, पन्ध्र मिनेट पनि बस्नु अप्ठ्यारो हुनेछ, तर उही व्यक्तिले १ fifteen मिनेट वा एक घण्टा थियेटरमा छोटो समयको लागी सोच्दछ उसलाई एक साँझको मनोरञ्जन।
एकले ध्यानमा अनुभव प्राप्त गर्न सक्दछ जहाँसम्म उनले थिएटरमा रमाईलो गरेकाहरूलाई पार गरिरहेछन्, सूर्य घामको किरणमा तेलको बत्तीको गुल्य प्रकाश बत्तीको रूपमा पार गर्दछ। मनन गर्दा, यो पाँच मिनेट वा एक घण्टा होस्, एक समीक्षा र दिनको उसले गरेको गलत कार्यहरूको निन्दा गरोस्, र भोलिमा त्यस्ता वा अन्य जस्तो कार्यहरू गर्नबाट वंचित गरोस्, तर उसले ती चीजहरूलाई अनुमोदन गरोस् जुन राम्रो गरी सकेको छ। त्यसोभए उसले आफ्नो शरीर र रातको लागि स्वयं संरक्षणको रूपमा यसको फारम सिद्धान्त निर्देशित गरोस्। उसले उसको दिमाग के हो सो विचार गरोस्, र ऊ आफैंमा सचेत सिद्धान्त के हो। तर उसले यो पनि निर्धारण र आफ्नो सपनाहरुमा, र निद्रामा सचेत हुन संकल्प गरोस्; र सबै कुरामा उसले आफ्नो चेतना सिद्धान्त मार्फत निरन्तर सचेत रहन निर्धारण गरोस्, र यसरी आफ्नो चेतना सिद्धान्त मार्फत find चेतना।